Ruzivo Rwerudzi: Kusvika Mireniyumu ine Dhata-Inotungamirwa Maitiro | Martech Zone
Maererano ongororo ichangoburwa naZillow, zviuru zvemamirioni zvinopedza nguva yakawanda vachitsvaga, vachitenga-tarisa kuitira sarudzo yakanaka uye vachienzanisa mitengo usati waita kutenga. Uye kunyangwe iyi nguva nyowani yemutengi-ane ruzivo mutengi achimiririra shanduko huru yemakambani nemakambani, inopawo mukana wegoridhe. Nepo vatengesi vazhinji vakachinja musanganiswa wavo wekushambadzira kuti vatarise pane zvinoitwa nedhijitari, zvakakoshawo kutora mukana weiyo pfuma yedata iri kushandiswa nezviuru zvemazuva ano.
Iko kushandiswa kwekufambira mberi kwazvino mukutsvagisa uye data tekinoroji hakufanirwe kuganhurirwa kudivi revatengi. Makambani anokwanisa kurwira dhata ne data kuitira kuti vanzwisise zvirinani vateereri vavo. Nekuziva kuti mamireniyamu ari kufamba sei mukutsvagisa, uye ndedzipi mhando dzeruzivo dzavari kushandisa, vashambadziri vanogona kuchinjika zvinoenderana kuti vakwezve kune ichi chiri kuwedzera kukosha kwevanhu.
Vape Ivo Zvavari Kuda
Funga nezve chii chinoita saiti senge Amazon inomanikidza - inosvika pakuziva mutengi uye inogona kuita yakanangana nekutenga mazano kune iye mushandisi. Uye hapana chikonzero bhizinesi rako risingakwanise kupinda mukati merudzi urwu rwe data analytics, kunyangwe iwe uchimhanya kuita zvidhinha-uye-matope.
Semuenzaniso, isu takagadzira algorithm ine ingangoita chiuru misiyano iyo inobatsira vatengesi vemotokari kuti vanzwisise mhando dzedzimotokari dzinotengwa nevatengi vavo. Izvi zvinotarisa zvinhu zvakaita seyakare yekutenga maitiro, iwo mabhureki ayo anozivikanwa mune iyo geographic musika, kukwikwidza kuongorora uye nezvimwe zvakawanda. Nenzira iyoyo, mushure memakore ane chiuru anotsvaga mhando yemota yaanoda, tinoona kuti mota iyi iri panzvimbo yemutengesi kuti vagadzirire kutengesa kana mireniyamu yaratidza.
Mamireniyamu haasi kushanyira mota mijenya kuti asvike padhuze zvisina chinangwa. vanoita icho chikamu online. Vanoshandisa 17 maawa kutenga paInternet yemotokari usati watenga. Muzera ranhasi, ibasa remutengesi kuve nechokwadi chekuti mujenya unoenderana nezvinodiwa zvemireniyumu. Mireniyamu vane zvombo zvine data; iwe unofanirwa kuve wakashongedzwa nedata rakawandisa data (kana zvisiri zvimwe!) Kuti uve wakagadzirira ivo. Imwe nzira iri nyore yekuita izvi ndeyekutarisa nhoroondo yekutengesa data, uye wauri kutengesa iwe. Uri kushandura vatengi vemireniyumu? Kana zvirizvo, ndezvipi zvigadzirwa kana masevhisi aari kuteedzera? Nekushandisa ruzivo urwu, unogona kugadzira yako yakakwana hesera uye wedzera kutengesa mune ramangwana.
Zvinokatyamadza makumi masere neshanu muzana yevane makore gumi nemasere kusvika pamakumi matatu nemasere ekutsvaga mazano kune vamwe vasati vatenga, sekureva tsvakurudzo kubva kuMintel. Uye kunyangwe muridzi webhizimusi angangonetsekana nekufunga kwekutarisana neruzhinji-kwakashata, wongororo dzepamhepo dzinopa mukana wekuwana isina kusvinwa, mhinduro yakatendeseka nezve izvo vatengi vako vanofunga nezvavanosangana nazvo. Zvangu ongororo pamasaiti senge Yelp, Edmunds, TripAdvisor, Cars.com, Angie's Chinyorwa (chero zvine musoro muindasitiri yako) uye shanda pamwe nechikwata chako kugadzirisa chero nzvimbo dzekunetsekana.
Asi usangotarisa pane zvisina kunaka ongororo. Ongororo dzakanaka dzinogona kuve dzinodzidzisa, nekuti ivo vanotsanangura maonero ezita rako uye mukurumbira. Iwe unozivikanwa nebasa rakanakisa revatengi? Zvekuderedzwa kukuru? Kune yakasarudzika sarudzo? Kana isu tikashanda nevatengesi vemotokari, isu tinoona izvo simba ravo, uye tinoshanda navo kugadzira kwavo kushambadzira uye mabhizinesi nenzira. Semuenzaniso, kana vatengi vachida mitengo yavo, vangangodaro vasingade kushambadzira iyo Ritzy BMW.
Wongorora iyo Mobile Chiitiko
Kungo kungotora mireniyumu muchitoro chako hakuna kukwana futi, nekuti ruzivo rwe nhare parizvino rwuri kutamba chinzvimbo nechitoro maitiro ekutenga. 57 muzana yemireniyamu shandisa nharembozha yavo kuenzanisa mitengo vachiri muchitoro. Kana iwe uine chinhu chinobata ziso ravo, uye mutengesi anobatsira anopindura mibvunzo yavo, iwe uchiri kungangorasikirwa nekutengesa kana mutengi Googles mukwikwidzi wako mumugwagwa achiwana mutengo wakaderera. Vari kudzidza zvakare ruzivo rwehunhu - semuenzaniso, kana mutengesi wemotokari achienderera mberi nekuvimbika pamusoro pekuti mota yakatendeka zvakadii, asi zvino mutengi achiverenga zvese izvi ongororo nezve kuparara kwemota, vanozove nemibvunzo.
Nhau dzakanaka pano ndedzekuti ruzivo rwe mobile runogona kuita senge fomu yedata rechikwata chako. Kuitisa zvimwe zvekunyepedzera zvekutenga zviitiko uye funga nezvezvinhu izvo mumwe munhu angangotarisa pafoni yavo. Zvinhu zvakasarudzika muchitoro chako, vakwikwidzi vemuno, wongororo, nezvimwe. Unogona kudzidza kuti mukwikwidzi ari kuratidza kushambadza kwezvishoma nguva dzese munhu paanotsvaga chigadzirwa chakakurumbira chako. Kana kuti pamwe webhusaiti yako haisi kuratidza kana mumwe munhu achitsvaga icho chigadzirwa, zvichiratidza kuti iwe unogona kunge uine rimwe SEO basa raunofanira kuita.
Asi uyu hausi mutambo wekudzivirira - unogona zvakare kuratidza mikana. Semuenzaniso, isu takabatsira vatengesi vedu vatambi kuona zviitiko apo vakwikwidzi vavo vanga vasiri kuita rakakura basa kushambadzira imwe kugadzira kana modhi. Izvi zvinokurudzira vatengesi vedu kuseta iyo modhi, pamwe nemutengo uri nani kana mhando, uye gadzira imwe mari.
Data iri Kwese Kwese. Shandisa.
Shanduko yedhijitari haisi yekungotanga peji reFacebook kana kumhanyisa zvimwe zvekutsvaga Iyi mienzaniso iri pamusoro inomiririra nzira shomanana dzaungabaya ruzivo rwepamhepo, uye ruzivo rwevashandisi, kuti unzwisise zviri nani mutengi wako. Nekutarisa paWebhu kuburikidza nemeso evatengi vako, iwe unowana ruzivo rwezvose zvavari kuona panguva yekutenga, zvichikubvumidza iwe kugadzirisa zvinoenderana kuti uwane bhizinesi ravo.
Tags: mijenya yemotokarimotokaridata-drivendigital revolutiongoldman sachsmireniyaliZviuru zvemakoremintelnharembozhawongororo dzisina kunakamaitiro ekutengaReviewszillow